Gudoomiye xigeenka golaha wakiillada Puntland oo ka hadlay wada-shaqaynta golaha shacabka ee dhinaca xeerarka iyo siyaasadaha – Kalfadhi
Gudoomiye xigeenka golaha wakiillada Puntland oo ka hadlay wada-shaqaynta golaha shacabka ee dhinaca xeerarka iyo siyaasadaha
Gudoomiye ku xigeenka labbaad ee golaha wakiillada Puntland Avv. Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa hadal ka jeediyay furritaanka kalfadhiga Shanaad ee golaha shacabka Soomaaliya, kaas oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Gudoomiye Ismaaciil ayaa ka hadlay wada-shaqaynta baarlamanka JFS iyo kan golaha wakiillada Puntland ee ku aadan dhinaca ka warqabka xeerarka iyo siyaasadaha. Wuxuuna ku boggaadiyay hoggaanka gola shacabka sida ay hawlaha baarlamanka iyo xiriirka dibedda u wadaan.
“Aad baan u tabaynaa in aan wada-tashi ka yeelanno xeerarka iyo siyaasadaha, waan filayaa in ay dhaqso u bilaaban doonto” Ayuu yiri Gudoomiye ku xigeen Ismaaciil.
Wuxuu u jeediyay baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya in ay midnimada ka wada shaqeeyaan iyagoo kala afkaar duwan isla markaasna ay caddaalad sameeyaan. “Nin walba miisaanka u saara wixii caddaalad ah” ayuu yiri Gudoomiye Ismaaciil oo dowladda federaalka ah ku ammaanay sida ay wax u waddo.
“Waxaan kaloo rajaynaynaa Soomaaliya horumar bay ku socotaaye in aydaan waddada ka duwin” Ayuu yiri gudoomiye ku xigeenku.
Horraantii bishan ayaa guddoonka golaha wakiillada Puntland oo uu markaas ka mid ahaa gudoomiye ku xigeen Ismaaciil Maxamed Warsame iyo hoggaanka golaha shacabka oo markaas uu ugu sarreeyay Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad waxay ka wada-hadleen iskaashiga labada gole.
Akhriso khudbadda Madaxweynaha Soomaaliya ee furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo khudbad ka jeediyay furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka